Ra’iisul wasaaraha oo kasoo horjeestay in xildhibaanada Hiiraan iyo Sh/dhexe lagu doorto Muqdisho (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaaraha oo kasoo horjeestay in xildhibaanada Hiiraan iyo Sh/dhexe lagu doorto Muqdisho (AKHRISO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa si adag uga hor yimid go’aan ay si wadajir ah u gaareen oday dhaqameedyada Hiiraan iyo Sh/dhexe iyo guddiga doorashada dadban ee Heer federaal.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa sheegay in go’aan ka gaaaridda goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanadda gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe ay tahay mid u taalo dowladda federaalka Soomaaliya balse aanu shaqo ku lahayn guddiga iyo oday dhaqameedyada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Sidoo kale, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa tilmaamay in guddiga doorashooyinka dadban looga bahan yahay inay wadatashi la yeeshaan isimada ugu jira labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe, kadibna natiijada kasoo baxda dib ugu soo celiyaan dowladda federaalka Soomaaliya, iyagoo aan wax go’aan ah gaarin.
“Waxaan u mahad-celinaya oo aan bogaadinayaa howsha wanaagsan ee ay wadaan guddiga doorashadda 2016-ka, hase yeeshee waxaan rabaa inaan faro oo aan u caddeeyo guddiga inay ilaaliyaan go’aanadii lagu gaaray shirka madasha hogaamiyeyaasha Qaran, kaas oo ahaa in go’aan ka gaaridda goobta lagu qabanayo doorashadda xildhibaanadda gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe ay tahay mid u taala dowladda federaalka Soomaaliya” Sidaas waxaa yiri ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
Dhinaca kale, arrintaan ayaa soo shaac bixineysa khilaaf kale oo u dhaxeeya madaxda xilkooda dhammaaday ee dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo labadoodaba haatan u wada sharaxan doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan diidmada ah ee kasoo yeeray ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii guddiga doorashada dadban ee heer federaal iyo oday dhaqameedyada Hiiraan iyo Sh/dhexe ay si wadajir ah usoo saareen go’aan ah in magaalada Muqdisho lagu soo dooran doono xildhibaanada labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe.